Umaki: iseluleko sesoftware | Martech Zone
Umaka: iseluleko sesoftware
Iseluleko Sesoftware sibambisene ne-Adobe ukudala Ucwaningo Lokuqala Lokusebenziswa Kokuqukethwe Kwezenhlalo. Imiphumela ebalulekile ibandakanya: Abakhangisi abaningi (amaphesenti angama-84) bavame ukuthumela okungenani amanethiwekhi amathathu wezokuxhumana, namaphesenti angama-70 athumela okungenani kanye ngosuku. Abamakethi bavamise ukukhomba ukusetshenziswa kokuqukethwe okubukwayo, ama-hashtag namagama abasebenzisi njengezindlela ezibalulekile zokwenza okuqukethwe kokuxhumana nabantu. Abangaphezu kwesigamu (amaphesenti angama-57) basebenzisa amathuluzi esoftware ukuphatha ukuthumela, futhi laba abaphendulile babhekana nobunzima obuncane
Abathengisi baphendukele kokumaketha kokuqukethwe, imithombo yezokuxhumana, ukukhangisa komdabu kanye namanye amasu amaningi wokumaketha ukwakha ubudlelwano nezithameli eziqondiswe kubo. Ochwepheshe bezokukhangisa bahlala befuna amasu namasu amasha wokwakha igunya nobunikazi bomkhiqizo wabo. Enye indlela eyingqayizivele lapho izinkampani eziningana zikhombisa isimo sawo njengabaholi bemboni ngokwakha ucwaningo oluyingqayizivele oluthembekile nolusizo kubafundi bazo. Incazelo Yokucwaninga Ngezimakethe Eziyinhloko: Ulwazi oluzayo
Ukubhloga kanye nemidiya yezenhlalo imarathon yokukhiqiza okuqukethwe okubalulekile nsuku zonke kubalaleli bakho. Inhloso ukukhiqiza igunya elanele nokuqukethwe esinabafundi, abalandeli noma abalandeli abagcina bekuguqula babe ngamakhasimende. Lokho kuthatha isikhashana, kwesinye isikhathi, ngakho-ke kubalulekile ukugcina iso lakho ligxile phambili. Enye indlela ongakwenza ngayo lokhu ukufaka ikhalenda lokuqukethwe ohlelweni lwakho lokuphathwa kokuqukethwe. Ikhalenda lokuqukethwe liyakuvumela